Waar mashruuca Berbera Corridor qof Marxuun Eng Yuusuf Muuse Caynab oo kale ah ha loo dhiibo. |
Waar mashruuca Berbera Corridor qof Marxuun Eng Yuusuf Muuse Caynab oo kale ah ha loo dhiibo.
Geerida xaq weeyo horaa loo garwaaqsaday’eh
Waad gudatay Muusow xilkii kula gudboonaay’eh
Haddaan geerida horteed geesiga la aqoonsan
Goblan weeye Soomaaliyey garashadaadiiy’eh
Abwaan Cali Sugule
“Haddii aan Injineer Yuusuf Caynab oo kale heli lahaa dalka waa dhisi kari lahaa. Caynab oo lugeeya oo la yidhaahdo waa nacas.” Mid ka mid ah khudbadihii ee Madaxweye Cigaal
Prof. Maxamed Sicid Gees – Ankara
Waxa jiray laba nin oo walaalo ah oo uu mid dhaqan jiray reerka iyo xoolihiisa, halka uu ninka kalena inta uu waqtigiisa ku qaadan jiray ergo iyo nabadayn uu kaga qaybqaadan jiray kolba wixii dhib iyo khilaaf ah ee yimaad, waxaannu kolba walaalkii soo mari jiray isagoo ergo wada oo uu ku odhan jiray; “Ergadaada soo sooryeeyey.”
Kadibna maalin dambe ayuu ninkii reerka iyo xoolihiisa iska dhaqan jiray ku yidhi walaalkiisii ergada samayn jiray; “Waar maad iskaga baxdid ergayntan badan ee aad waddid oo aad reerkaaga dhaqatid.” Waxaannu walaalkii ugu jawaabay; “Miyaad xoolahan iyo reerkan dhaqan lahayd haddii aanan ergadaas iyo nabadayntaas ku jirin oo aanad meel walba nabad ka islaaxin?
Haddaba, waxa aan aniguna leeyahay; miyaad dhisan lahayd fooqyadan quraaraddu ku dheehan tahay iyo warshadahan haddii marxuum Eng. Yuusuf Muuse Caynab iyo dan-laawayaal la mid ihi aanay nidaam dowladeed iyo sharci-ku-nolaasho dhidibbada u taagin?
Allaah ha u naxariistee marxuun Eng. Yuusuf Muuse Caynab waxa uu wax ku bartay Dugsiga Sare ee Sheekh, Kulliyaddii Injineernimada (Engineering) ee Jaamacaddii Soomaaliyeed ee Gahayr iyo Michigan University Anbar, isagoo ahaa Hormuudka Kulliyadda Injineerinka ee Jaamacadda Gahayr, markii lagu kala tegay Muqdisho ee dagaalku ka dhacay.
Taariikhdu markii ay ahayd sannadkii 1996-ka, isaga oo u shaqeeya Hay’adda UNOPS oo reerkiisa dhaqda, gurina ka dhistay xaafadda Jigjiga-yar, gaar ahaan meel u dhawayd foornadii roodhida ee Ala-yaasir ee magaalada Hargeysa ayuu marxuum Maxamed Xaaji Ibraahim Cigaal u magacaabay inuu noqdo Wasiirka Boostada iyo Isgaadhsiinta Somaliland, iyadoo muddadii uu marxuum Cigaal Madaxweynaha ahaa ilaa sannadkii 2003 uu soo qabtay xilalka wasiirnimo ee kala ah;
Wasiirkii Gaashaandhigga iyo
Wasiirkii Hawlaha Guud.
Madaxweyne Cigaal waxa uu mar ku khudbadeeyey oo yidhi; “Haddii aan Injineer Yuusuf Caynab oo kale heli lahaa, dalka waan dhisi kari lahaa. Caynab oo lugeeya oo la yidhaahdo waa nacas.”
Sida la ogyahay, madaxda Soomaalida intooda badan marka ay xil qabtaan, waxay u qaataan in qayb loo siiyey Wasaaradda ama Hay’adda dowladeed ee loo magacaabay isaga iyo beeshooda oo sidii uu doono ugu takrifali karo, wayna kooban tahay inta dareen ama (empathy) u leh dib-u-dhaca iyo faqriga iyo kadeedka ay ku noshahay bulshada uu Wasiirka ama Agaasimaha u yahay.
Xog-ogaalnimaday markii Eng. Yuusuf Muuse Caynab loo magacaabay Wasiirka Gaashdhigga sannadkii 1997, waxay ahayd mar la qarameeyey kumannaan maleeshiyo-beeleedyo ah, kadib markii uu soo dhammaaday, lagana soo gudbay dagaalladii sokeeye ee socday intii u dhexaysay 1994 ilaa1996.
Wasiir Eng. Yuusuf Muuse Caynab iyo Taliskii Ciidanka Qaranka ee xiligaas Ismaaciil Shaqale, waxay fureen saddex xero oo lagu tababaro, laguna qarameeyo maleeshiyada Beelaha, xeryahaas oo laga kala furay degaannada Sheekh, Dararweyne iyo Gorayo-cawl. Halkaas ayaa lagu kala hadhay oo ciidanka maanta jira dib loogu dhisay oo dhidibada loo taagay.
Hawshaasi kadib, waxa loo magacaabay Wasiirka Hawlaha Guud, si loo dhaqaaqiyo hawlaha wasaaraddaas, isla markaana loo hagaajiyo dhulka iyo buundooyinkii lagu burburiyey dagaalladii Jabhadda SNM iyo ciidammadii Dowladdii Siyaad Barre. Kharashka lagu dhisayey oo ay ballanqaaday EU-du (Midawga Yurub), waxay ahayd tijaabo lagu eegayey xilkasnimada maamulka Somaliland.
Tartan xallaal ah ayaa loo galay dhismaha dhulkaas buundooyinka ahaa oo lagu kala guulaystay, waxa lagu furay buqshadihii shirkaddaha ku tartamay qandaraaskaas madal loo dhan yahay, waxayna ka qabsoontay xarunta Guriga Shaqaalaha ee Hargeysa. Mashruucii guul ayaa laga gaadhay. Waxa la dhisay Hay’adda Waddooyinka oo shirkad caan ah oo Injineeriyadda ah oo la yidhaahdo Louis Berjers ayaa habaysay sharciga iyo qaabka maamul ee hay’addu ku shaqayso. Waxa lagu martiqaaday hay’adda shirar dowladdu la ictiraafsan yahay joogaan oo lagu ammaanay.
Muddadaas uu xilka Wasiirnimo hayey, waxa ay Wasaaradda Hawlaha Guud ku guulaysatay dib-u-kicintii warshaddii korontada Hargeysa iyo gelintii korontada qaybo ka mid ah magaalada Hargeysa.
Waxa kale oo Wasaaradda Hawlaha Guud ku guulaysatay inay diiwaangeliso guryaha dowladda iyo illaalinta dhulka bannaan ee Shacabka. Waxa kale oo la joogteeyey in Wasaaradda Hawlaha Guud qiimayso oo kormeerto wixii dhis ah ee xukuumaddu maalgeliso.
Allaah ha u naxariistee marxuum Eng. Yuusuf Muuse Caynab ayaa iigu yimid Wasaaradda Maaliyadda waqtigii la wadday mashruucii lagu dayac-tirayey buundooyinka Gabiley ilaa Berbera, kadibna waxa uu igu yidhi; “Masruuf reerkii ma haysto ee wax ii raadi.” Waxaan ugu jawaabay; “Anigu waa ku rummaysanayaa ee reer Somaliland ku rumaysan maayaan adigoo mushruuc $5 Milyan oo doollar ah bixiyey in aad reerkaagi masruuf u raadinayso.” Doob, dareen ayaa dilay!
Khawaajuhu (dalalka reer galbeedku) way ilaashadaan lacagtooda, wayna dabagalaan oo caddeeyaan haddii wax is-daba-marin ihi dhacday. Carab dheg-cas waxba la isma weydiiyo. Mee mashruucii Imaaraadku (United Arab Emirates) ee biyo-ballaadhinta magaalada ooman ee Hargeysa? Waar mashruuca Berbera Corridor qof Marxuun Eng Yuusuf Muuse Caynab oo kale ah ha loo dhiibo.